My iPhone agaghị eziga Foto! Nke a bụ The Real Idozi. - Iphone
kedu ihe mere na ekwentị m anaghị ejikọ na oku wifi
Ego ole ka ịkpa nwa na -efu na United States na -efu?
nọmba m amaghị iphone 5
enweghị ike ndabere iphone 6 ka icloud
ihe bụ pulse na bible
My iPhone agaghị ezipụ Foto! Nke a bụ The Real Idozi.
Na-anwa izipu foto site na iPhone gị, mana ha agaghị agabiga. Ọ dịghị mkpa ma ị na-eji Ozi, Foto, ma ọ bụ ngwa ọzọ - ọ nweghị ihe na-arụ ọrụ. Kama, iPhone gị kwuru E Nyeghị ha na-acha uhie uhie exclamation ebe n'ime gburugburu, ma ọ bụ foto gị na-rapaara agbata site na iziga na mgbe rụchaa. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị agaghị eziga foto na otu esi achọpụta ma dozie nsogbu ahụ maka ezi.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime iji chọpụta ihe kpatara iPhone gị agaghị eziga foto bụ zaa ajụjụ abụọ a, m ga - enyere gị aka abụọ.
Ndi Foto adighi ezipu ozi site na iji iMessage ma obu ozi ederede mgbe nile?
Oge ọ bụla ị zitere ma ọ bụ nata ozi ederede ma ọ bụ ozi foto na iPhone gị, ọ na-agafe dịka ozi ederede mgbe niile ma ọ bụ iMessage. Na ngwa Ozi, iMessages ị zipụrụ gosipụtara na egosipụta na-acha anụnụ anụnụ na ozi ederede ị zitere na-egosi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
N'agbanyeghị na ha na-arụkọ ọrụ ọnụ n'enweghị nsogbu na ngwa Ozi, iMessages na ozi ederede jiri teknụzụ dị iche iche izipu foto. A na-eziga iMessages site na iji Wi-Fi ma ọ bụ atụmatụ data ikuku ikuku ị zụrụ site na ụgbọelu ikuku gị. A na-ezipụ ozi ederede / foto mgbe niile site na iji atụmatụ ozi ederede ịzụrụ site na ụgbọelu ikuku gị.
ibe iji chọọ ọrụ na usa
Mgbe iPhone gị agaghị ezipụ foto, nsogbu a na - abụkarị ozi ederede ma ọ bụ iMessages - ọ bụghị na ha abụọ. Ndị ọzọ okwu, foto ga zipu na iMessages, mana agaghị ezipụ ya na ederede / ozi foto - ma ọ bụ otu ọzọ. Ọ bụrụgodị na ị mee nwere nsogbu na ha abụọ, anyị kwesịrị dozie nsogbu ọ bụla iche.
Iji chọpụta ma iPhone gị ọ na-enwe nsogbu izipu ozi na iMessages ma ọ bụ ozi ederede, mepee Ozi ngwa ngwa ma mepee mkparịta ụka na onye ị na-enweghị ike izipu foto. Ọ bụrụ na ozi ndị ọzọ izipụrụ onye ahụ dị na acha anụnụ anụnụ, iPhone gị agaghị ezipụ foto site na iji iMessage. Ọ bụrụ na ozi ndị ọzọ dị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, iPhone gị agaghị ezipụ foto site na iji atụmatụ ozi ederede gị.
Ihe osise esighi na ya ziga mmadu, ma obu onye obula?
Ugbu a na ịmara ma nsogbu dị na iMessages ma ọ bụ ozi ederede / foto, ọ bụ oge iji chọpụta ma ị nwere nsogbu izipu foto na onye ọ bụla ma ọ bụ naanị otu onye. Iji mee nke a, gbalịa iziga onye ọzọ foto dị ka ule, mana gụọ nke mbụ:
Tupu izipu foto nyocha, dị njikere ị ziga ya onye na - eji otu teknụzụ (iMessage ma ọ bụ ederede / ozi eserese) dịka onye ị na - enweghị ike izipu foto. Nke a bụ ihe m na-ekwu:
Ọ bụrụ na eserese agaghị eziga iji onye na-eji iMessage, zipụ onye nlele ule nyocha onye ọzọ na-eji iMessage (acha anụnụ anụnụ). Ọ bụrụ na ị foto agaghị eziga iji gị ederede / picture ozi ozi plan, zigara a ule picture ka onye ọzọ onye ozi na-aga site dị ka ozi ederede (na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ egosipụta).
Dị ka usoro isi, ọ bụrụ na foto agaghị ezigara naanị otu onye, ​​nsogbu ahụ dị nke ha ọgwụgwụ na ha nwere ike mkpa ịgbanwe ihe na ha iPhone ma ọ bụ na ha wireless ụgbọelu idozi nsogbu. Ọ bụrụ na ị iPhone agaghị eziga foto na onye obula , nsogbu dị na nke gi ọgwụgwụ. Aga m enye gị ngwọta maka ọnọdụ abụọ dị n'okpuru.
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị eziga foto site na iji iMessage
1. Nwalee njikọ Internetntanetị gị
A na-eziga iMessages n’elu njikọ iPhone gị na ịntanetị, yabụ ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịnwale njikọ iPhone gị na ịntanetị. Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ ịnwale izipu ozi site na iji atụmatụ data ikuku gị wee nwaa izipu ozi mgbe ejiri iPhone gị na Wi-Fi.
Ọ bụrụ na ejikọrọ iPhone gị na Wi-Fi na iPhone gị agaghị ezipụ foto, gaa na Ntọala -> Wi-Fi ma gbanyụọ Wi-Fi. Gị iPhone ga-ejikọ na netwọk data cellular, ị ga-ahụ 5G, LTE, 4G, ma ọ bụ 3G ka ha pụta na akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ.
Gbalịa iziga foto a ọzọ. Ọ bụrụ na ọ gafere, nsogbu ahụ dị na njikọ Wi-Fi gị, edeela m edemede na-akọwa ihe ị ga - eme mgbe iPhone gị agaghị ejikọ na Wi-Fi . Echefukwala ịgbanye Wi-Fi mgbe ị mechara!
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị eziga foto mgbe ejikọtaghị ya na Wi-Fi, gaa ebe nwere Wi-Fi, jikọọ na netwọk Wi-Fi na Ntọala -> Wi-Fi , ma gbalịa izipu ozi ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na ozi ahụ gafere, nsogbu ahụ nwere ike ịbụ na njikọ data sellular gị iPhone.
2. Chọpụta Data Cellular agbanwuru
Gaa na Ntọala -> Cellular ma hụ na mgba ọkụ na-esote Data Cellular agbanwuru. Mgbe ị na-ejikọghị na Wi-Fi, a na-eziga iMessages site na iji atụmatụ data ikuku gị, ọ bụghị atụmatụ ozi ederede gị. Ọ bụrụ na agbanyụrụ data Cellular, foto ndị ị na-eziga dị ka ozi ederede / ozi foto ga-agafe, mana foto ị zigara dị ka iMessages agaghị.
3. Ndi Onye ozo nwere iMessage agbanye?
N’oge na-adịghị anya mụ na otu enyi m rụkọtara ọrụ nke ozi ya na-agaghị agara nwa ya nwoke mgbe ọ nwetara ekwentị ọhụrụ, na-abụghị Apple. Ọ bụ nsogbu a na - ahụkarị na - eme mgbe mmadụ gbanwere gam akporo ama ma ọ pụọ na iMessage.
Nke a bụ ọnọdụ: Gị iPhone na ihe nkesa iMessage chere na onye ahụ ka nwere iPhone, ya mere ha na-anwa izipu foto site na iji iMessage, mana ha anaghị agabiga. N'ụzọ dị mma, e nwere ụzọ dị mfe ha ga-esi pụọ na iMessage ma dozie nsogbu ahụ maka ihe ọma. Gwa ha soro usoro a Ibe nkwado Apple ebe ha nwere ike iwepu iMessage site na izigara onwe ha ozi ederede na iji kọmputa ede na koodu nkwenye n'ịntanetị.
4. Tọgharia Network Ntọala
Mgbanwe na-enweghị isi na ngwa Ntọala nwere ike ịkpata nsogbu njikọ nwere ike bụrụ aghụghọ iji chọpụta, mana enwere ụzọ dị mma iji dozie ha niile otu oge. Tọgharia Network Ntọala bụ a oké ụzọ iji tọgharịa dị nnọọ ndị ntọala na-emetụta ụzọ gị iPhone ejikọ Wi-Fi na cellular netwọk, enweghị na-emetụta ọ bụla nke ozi nkeonwe gị. Ga-enyerịrị na netwọk Wi-Fi ọzọ, yabụ gbaa mbọ hụ na ị mara paswọọdụ tupu ịga n'ihu.
Iji tọgharịa ntọala ntọala gị na iPhone, gaa na Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala , tinye passcode gị, wee pịa Tọgharia Network Ntọala . Gbalịa na-eziga ọzọ ule ozi mgbe gị iPhone reboots iji hụ ma ọ bụrụ na e edozi nsogbu ahụ.
ụlọ ọrụ ekwentị na usa
Ọ bụrụ na ị ka na-enwe nsogbu mgbe ị gbasoro usoro ndị a, gafee ngalaba akpọrọ Ọ bụrụ na iPhone gị ka ga-ezipụ eserese .
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị eziga foto site na iji atụmatụ ederede / foto izipu ozi gị
1. Gbaa mbọ hụ na agbanyere ozi MMS
Anyị atụleworị ụdị ozi abụọ a na-eziga site na iji ngwa Ozi: iMessages na ozi ederede / ozi foto. Na, iji mee ka ihe sie ike, enwerekwa ozi ederede abụọ / ozi eserese. SMS bụ ụdị izipu ozi ederede nke na-ezipụ obere ederede, yana MMS, nke mepụtara mgbe e mesịrị, nwere ike izipu foto na ozi toro ogologo.
Ọ bụrụ na agbanyụrụ MMS na iPhone gị, ozi ederede mgbe niile (SMS) ka ga-agafe, mana eserese agaghị. Iji jide n'aka na agbanyere MMS, gaa na Ntọala -> Ozi ma hụ na mgba ọkụ na-esote MMS Izi ozi agbanwuru.
2. Tulee Maka Nwelite Ntọala ụgbọelu
Apple na wireless ikuku ụgbọelu routinely inupụ ụgbọelu ntọala mmelite iji nyere aka melite njikọ iPhone gị na netwọkụ gị. Gị iPhone nwere ike ịnweta nsogbu cellular ma ọ bụrụ na ntọala ndị na-ebu ụgbọelu adịghị ọhụrụ.
Mmapụta na-egosi na ihuenyo mgbe melite ntọala ntọala ụgbọelu dị. Ọ bụrụ n'ịhụ mmapụta na iPhone gị, pịa Mmelite .
Nwere ike iji aka ịlele maka ihe mmezi ntọala ụgbọelu site na imeghe Ntọala na ịme ọpịpị General -> Banyere . Mmapụta ga-apụta ebe a n'ihe dị ka sekọnd iri ma ọ bụrụ na melite ntọala ụgbọelu dị. Ọ bụrụ na mmapụta apụtaghị, gaa na nzọụkwụ ọzọ!
3. Tọgharia Network Ntọala
4. Kpọtụrụ Onye na-ahụ maka ikuku gị
O di nwute, obula na nsogbu nke iPhone gi na onye na-ejighi ikuku gi, i nwere ike igakwuru ha maka enyemaka. Okwu ndị ahịa na ọpụpụ ọrụ aka nwere ike ime ka anaghị enyefe ozi MMS, naanị otu ụzọ esi mara nke ọma bụ ịkpọ ma jụọ.
Thezọ kachasị mfe iji chọpụta ọnụọgụ ịkpọ oku bụ ịchọ Google maka “ gị ụgbọelu wireless (Verizon, AT & T, wdg) wireless nọmba nkwado ndị ahịa ”. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na Google 'Verizon wireless ahịa nkwado nọmba', ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ na elu nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụrụ na gị iPhone N'agbanyeghị Ga-ezipụ Foto
Ọ bụrụ na ịnweghị ike izipu foto na iPhone gị, ndụmọdụ m banyere otu esi aga n'ihu na-adabere ma ị nweghị ike izipu foto naanị otu onye ma ọ bụ na ịnweghị ike izigara onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike izipu foto na naanị otu onye, ​​jụọ ha ma ha nwere ike ịnata iMessages ma ọ bụ ozi ederede / foto site na onye ọ bụla. Cheta, ha nwere ike ịnata iMessages mana ọ bụghị ozi ederede / foto, ma ọ bụ otu ọzọ. Betzọ kachasị mma gị bụ isoro ha kerịta edemede a ma mee ka ha gafee usoro nsogbu nsogbu ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ na nsogbu ahụ dị na njedebe gị, nke a bụ ihe ị ga - eme na - esote: Hichapụ mkparịta ụka gị na ha na ngwa Ozi, hichapụ kọntaktị ha site na iPhone gị, ma soro ntuziaka ndị dị n'elu iji Tọgharia Ntọala Ntọala. Mgbe gị iPhone reboots, pịnye ha nọmba ekwentị n'ime Ozi ngwa na-agbalị na-ezitere ha a foto ozi. Ọ bụrụ na ọ gafere, tinye ozi kọntaktị ha ọzọ ma ị ga-aga.
Ọ bụrụ na ka anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịkwado iPhone gị na iCloud ma ọ bụ iTunes, weghachite iPhone gị, wee weghachite data gị na nkwado ndabere. Iweghachi iPhone gị na-ehichapụ ihe niile dị na ya ma weghachite ngwanrọ ahụ, usoro nke nwere ike idozi ụdị nsogbu ngwanrọ niile. M nwere ike ikwu na ị na-eme a DFU weghachi, nke bụ a pụrụ iche ụdị weghachi na Apple techs iji na Apple Store. Edere m otu edemede na-akọwa olee otú DFU weghachi gị iPhone .
Ugbu a iPhone gị na-eziga foto ọzọ, gaa n'ihu ma zipụ ụfọdụ foto gị na ezinụlọ gị na ndị enyi gị. Mana kpachara anya: Amaara m onye nwara izigara ezinụlọ ya dum foto nke osisi Krismas ya n'otu ederede n'otu ezinụlọ, mana na-akpachaghị anya zigara ọzọ. Ọ bụ ihe adịghị mma ekeresimesi. Ọ ga-amasị m ịnụ banyere ahụmịhe gị na-achọpụta ihe kpatara na ị nweghị ike izipu foto na iPhone gị na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a, m ga-anọ ebe a iji nyere aka n'ụzọ.
esi enweta bitmoji na iphone keyboard
Daalụ maka ịgụ, ma cheta ịkwụ ụgwọ ya,